SECM Eyes State-owned Enterprises to Become Players in Stock Market | Myanmar Business Today
HomeBusinessSECM Eyes State-owned Enterprises to Become Players in Stock Market
BusinessFeaturedInvestment & FinanceLocal
SECM Eyes State-owned Enterprises to Become Players in Stock Market
U Htay Chun, Member of SECM, deliversakeynote speech ataseminar held on July 21, 2020
Securities and Exchange Commission of Myanmar (SECM) is planning to convince state-owned enterprises (SOEs) to become listed companies at the five-year-old Yangon Stock Exchange, which only has six listed companies so far.
“For the SOEs, which need government funding, they can remain as state-owned ones. For the rest, which should run without government funding and under private management, and, by becoming listed companies, can benefit shareholders while reducing investment burden on the government, they, we have discussed, should be made listed companies,” U Htay Chun, Commissioner at SECM, told Myanmar Business Today.
He exemplified Vietnam’s success story in making its stock market more active and developed by transforming state-owned enterprises into listed companies. Therefore, Myanmar is aiming to develop its inactive stock exchange by transforming SOEs to listed ones. The government, on the other hand, has also been privatizing some of the state-run businesses.
There are six listed companies on the YSX: First Myanmar Investment (FMI), Myanmar Thilawa SEZ Holdings (MTSH), Myanmar Citizens Bank (MCB), First Private Bank (FPB), TMH Telecom (TMH) and Ever Flow River Group (EFR). During the pandemic,anew company also filed to be listed on the Yangon Stock Exchange.
To make the stock market more active and robust, SECM has also allowed foreign investors and organizations to buy stocks at Yangon Stock Exchange starting from March 20 this year. As of July 10, foreign investors and entities have purchasedatotal of 38,910 shares from FMI (5,715 shares), MTSH (27,815 shares) and EFR (5,380 shares).
In 2019, the total trade volume at the Yangon Stock Exchange was over 2.4 million shares worth over K13.391 billion.
နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကို ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းဝင် ကုမ္ပဏီများဖြစ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေကြောင်း ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကြီးကြပ် ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဉီးဌေးချွန်က Myanmar Business Today ကိုပြောသည်။
“အစိုးရ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ဆက်သွားသင့်သော အလုပ်ဆိုရင်တော့ ဒီအတိုင်းနေမှာပေါ့ဗျာ။ အစိုးရ ဘတ်ဂျက်နဲ့ ဆက်သွားသင့်သော အလုပ်ထက်၊ အများပြည်သူရှယ်ယာဝင်ခြင်းအားဖြင့် အကျိုးရှိမယ်၊ အစိုးရလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလျော့သွားမယ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုမှာလည်း ပုဂ္ဂလိက စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးတွေကို ရွေးချယ်သွားဖို့ ဆွေးနွေးထားပါတယ်”ဟု ဦးဌေးချွန်က ပြောသည်။
ဗီယက်နိုင်ငံ စတော့ဈေးကွက်တွင်လည်း နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းများကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုကာ စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင် အများပိုင်ကုမ္ပဏီများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် စတော့ဈေးကွက်တိုးတက်လာခဲ့သည့် သာဓကရှိကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း စတော့အိတ်ချိန်း တိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင် ကုမ္ပဏီများ ဖြစ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်းသိရသည်။ အစိုးရအနေဖြင့်လည်းနိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကို ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေသည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန်တော့အိတ်ချိန်းဝင်ကုမ္ပဏီ ခြောက်ခုရှိကာ ကိုဗစ်ကာလတွင်ဝင်ရောက်ရန်အ ဆိုပြုထားသော ကုမ်ပဏီတစ်ခုရှိကြောင်းသိရသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ် ၂၀ ရက်မှစတင် ကာ နိုင်ငံခြားသားများ၊ နိုင်ငံခြားအဖွဲ့အစည်းများကို ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်းကုမ္ပဏီများ၏ အစုရှယ်ယာများဝယ်ယူ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၁၀ ရက်စာရင်းများအရ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းစာရင်းဝင်ကုမ္ပဏီခြောက်ခုအနက် ကုမ္ပဏီသုံးခု၏ အစုရှယ်ယာ ၃၈၉၁၀ ခုကို ဝယ်ယူထားသည်။ ကုမ္ပဏီအလိုက်ဝယ်ယူထားသော အစုရှယ်ယာပမာဏများမှာ ပထမမြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီလီမိတက် (FMI) တွင် ၅၇၁၅ ခု၊ မြန်မာသီလဝါ အက် (စ်)အီးဇက်ဟိုးလ်ဒင်းပတ်ပလစ်လီမိတက် (MTSH) တွင် ၂၇၈၁၅ ခု၊ Ever Flow River Group Public Co.Ltd တွင် ၅၃၈၀ ခု ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် တစ်နှစ်လုံးတွင် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၌ အစုရှယ်ယာပေါင်း ၂ဒသမ၄ သန်းကျော် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ် ၁၃ဒသမ ၃၉၁ ဘီလီယံကျော်ရှိခဲ့သည်။
Previous articleChina and Myanmar Seek Ways to Streamline Trade During the COVID-19
Next articlePrice Floor for 100 Tins of Rice Set at K520,000